Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-3 atofotofo kwisakhiwo esinemigangatho eyi-16 - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-3 atofotofo kwisakhiwo esinemigangatho eyi-16
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguTatiana
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uTatiana iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu entle ikumgangatho we-16 kwisakhiwo esitsha esiphuculweyo sale mihla.
Onke amagumbi abekwe odwa, atshixwa ngesitshixo.
Ithuba elikhethekileyo lokubona indawo yokuphumla yaseBelokurikha ukusuka eluphahleni lwendlu. Jonga ukusuka efestileni ukuya kwidolophu yaseTserkovka, ipanorama yesixeko 16/16, indawo yokupaka edibanayo nomqobo, uphononongo lwevidiyo
Ubuncinci bexabiso lendlu xa ungena
Igumbi eli-1 1 umntu 1000 i-ruble / usuku ngomntu ngamnye, indlu inikwe inketho yegumbi elinye (amagumbi ama-2 aya kuvalwa).
Ikhitshi elincinci, isinki, ifriji, el. isitovu, i-microwave, i-multi-cooker, itafile yokutyela, izitulo, umatshini wokuhlamba, i-ayina, ibhodi yoku-ayina, isomisi sempahla.
Igumbi elikhulu linebhedi ephindwe kabini i-180 x 200 cm ububanzi, amanye amagumbi amabini angama-160x200 cm kunye noomatrasi bamathambo kwikhava, igumbi ngalinye linesifuba sedrowa, isibuko, itafile, izitulo, i-wardrobe, i-TV ye-LED.
Indlu enoyilo oluphuculweyo, zonke iziseko ezingaphakathi komgama wokuhamba (isikhululo sebhasi, iSanatoriums, iMarike, ivenkile kaMaria-Ra, ikhemesti, iSushi, iParadesi yeziqhamo, iCafe, iindawo zokutyela, imivalo yeKaraoke, iiklabhu zomdaniso kunye nolonwabo, iBowling, ithambeka lokutyibilika, Izixhobo zemidlalo. irenti, Ice iZiko loFikelelo olwenziwe Lula rinks, iinkqubo wabakhenkethi, Horseback ukukhwela, imoto kunye ATV ukhenketho, iinqwelo-ntaka, "SPA" amaziko, "Aquapark", Amadama kunye izakhiwo terminal, njalo njalo)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Белокуриха